ကိုဇင် (ကုန်းဇောင်း) မှ ကြိုဆိုပါ၏
Microsoft Access 2010 စာအုပ်
Microsoft Access 2010 ဖြင့် Database ရေးဆွဲခြင်း ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါခင်ဗျာ...Step by Step ရှင်းလင်းပြသပေး ထားတဲ့စာအုပ်လေးပါခင်ဗျာ။ (4.27) MB ...
I love you Virus ရေးနည်းလေးပါ
ကဲကိုယ်ရဲ့ ကောင်မလေး PC ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း PC ပဲ ဖြစ်ဖြစ်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံး အနေဖြင့် မိမိ ကောင်မလေးအတွက် I love you Virus ကို...
www.kozinkonzaung.blogspot.com Microsoft Office Project Professional 2010 Serial Number Microsoft Office Professional 2010 6QFDX-PYH2G-...
အင်တာနက် အသုံးပြုနည်းနှင့် Facebook အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
ကို သူရအောင် ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးပါခင်ဗျာ www.kozinkonzaung.blogspot.com Download 4shared Password - Kozin
ကွန်ပျူတာ ပေါ်တွင် Folder တွေနဲ့ ပြည့်နေအောင် လုပ်တဲ့ Virus ရေးနည်း
အရင် က I love you virus ရေးနည်းတင်ပြီးပါပြီ။ အခုတစ်ခါ ကွန်ပျူတာ ရဲ့ Desktop ပေါ်တွင် Folder တွေနဲ့ ပြည့်နေအောင် လုပ်တဲ့ virus ရေးနည်းလေးပါ။...
Internet Speed မြင့်တဲ့ Software
www.kozinkonzaung.blogspot.com ဒီ Software လေးကတော့ Internet Connection Download & Upload Speed မြင့်ပေးတဲ့ Software လေးဖြစ်...
မန္တလေး မြို့ သေဆုံးခြင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
လင်းလင်း ရဲ့ မန်းမြို့ သေဆုံးခြင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းစာ သားတွေကလည်း ကောင်း၊ အနှစ်သာရလည်း ရှိပါတယ်။ နားထောင်မယ်ဆိုရ...
Opera သည် အင်တာနက် Browser ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile တော်တော်များများတွင် Opera ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါသည်။ Opera ကို အသုံးပြုရခြင်းဖြင့် ...
Android မှာ Window 8 Style သုံးရအောင်
Android ဖုန်းမှာ Window 8 အသုံးပြုနိုင်တဲ့ apk လေးပါ ခင်ဗျာ.. Download4shared Download Sendspac...
အကျင့်ဆိုး - ရွှေတိုင်ညွန့်
နည်းပညာ blog ပေမဲ့ ဒီသီချင်းလေးတွေကတော့ တင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ။ အားလုံးကို နားထောင်စေခြင်ပါတယ်....... တေးရေး၊ ဂန္ထ၀င် ဂီတစာဆ...
Opera သည် အင်တာနက် Browser ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile တော်တော်များများတွင် Opera ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါသည်။ Opera ကို အသုံးပြုရခြင်းဖြင့် website ကြည့်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ပါသည်..။ လို အပ်ပါက
အောက်တွင် Direct Download လုပ်နိုင်ပါသည်.။ 2012 last version လေးလဲ ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by kozin at 11:12 AM0comments
Window 8 Activator V 1.0
Window 8 အသုံးပြုနေသူများအတွက် Window 8 Activator လေးပါခင်ဗျာ။ အသုံးပြုလမ်းညွန်ကို ဖိုင်ထဲတွင် ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ 100 ရာနူန်းပြည့် အာမခံ နိုင်တဲ့ Activator လေးပါပဲ။ Window 8 Activator
သည် အင်တာနက်တွင်ရှာဖွေရာတွင် အလွန်းရှားပါးနေပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရတုန်းလေး ယူထားကြပါ။
သူ Support လုပ်နိုင်တဲ့ Window 8 OS များကတော့
Download Media (4.57 MB)
Download Sharebeast (4.57 MB)
Posted by kozin at 11:06 AM0comments
Labels: Activator, Window 8
Solo Guitar (Android)
Android ဖုန်းတွေအတွက်ပါ။ Solo Guitar လေးတီးလို့ ရမဲ့ apk လေးပါခင်ဗျာ။
Android 1.6 and up မှာ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Download Media (5.6 MB)
Download Sharebeast ( 5.6 MB)
Password - kozin
Posted by kozin at 10:38 AM0comments
ဒီ Software လေးကတော့ Internet Connection Download & Upload Speed မြင့်ပေးတဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်။
Serial key ပါ ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.
Posted by kozin at 10:18 AM0comments
Who’s is On My Wifi Ultimate 2.08
ဒီ software လေးကို အရင်က လည်း တင်ထားပေးခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ တော့ Ultimate လေးဖြစ်လို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးက ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုသလဲ ဆိုတော့ မိမိ Wireless Network ထဲတွင် မည်သူတွေ ၀င်ရောက် အသုံးပြုနေလဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြသပေးပါတယ်။ မိမိ Wifi ထဲမှာ User တစ်ယောက် အသစ် online ပေါ်တက်လာတာနဲ့ သူက အသံဖြင့် ပြောပေးပါတယ်။ ဒီ User က ကို အသုံးပြု ခွင့်ပေးတဲ့ User လား ဒါမှမဟုတ် မိမိ Network ထဲကို Hack ပြီး ၀င်ရောက်လာ သူလားဆိုတာကို ကြည့်နိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Wifi လွင့် ရောင်းမည့်သူတွေအတွက် လည်း အထူးအသုံးဝင်မဲ့ Software လေးပါပဲခင်ဗျာ
Posted by kozin at 9:13 AM0comments
Avast Internet Security 2013 အတွက် License Keys လေးပါ
Avast Internet Security 2013 အတွက် License Key လေးပါခင်ဗျာ။ Avast သည် Antivirus Software ဆိုတာတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူလုပ်နိုင်တာတွေကတော့
Posted by kozin at 8:36 AM0comments
Labels: Anti Virus, Keys
Minimum your pc system requirements :
1. Operating system : Windows XP for sp3 (32bit), Vista for sp1 (64 or 32 bit).
2. Processor : Intel 2.00GHZ or better.
3. Ram : 512MB for windows XP and 1GB for windows vista or 7.
4. HDD : 500MB up to free space.
Posted by kozin at 6:35 PM0comments
PC Optimizer Pro & Patch
PC Optimizer တွင် Patch ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Software ကတော့ PC ကို မြန်အောင်နှင့် တခြား အရာများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Registry Optimizer tests လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Software Uninstaller uninstalls ကိုလည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.။ Backup Recover လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် အောင်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
Posted by kozin at 6:12 PM0comments
WinRAR 4.20 Beta3Full Version Pre-Activate For PC
Win RAR also can manage the protecting and back-up details in the kind RAR and ZIP. Moreover, Rar Lab Win RAR 4.20 Try out3is able to Unpack / decompression details in the kind CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z.
Download Hotfile ( 2.9 MB )
Posted by kozin at 4:56 PM0comments
Puppet War FPS (Android Game)
Android အတွတ် Puppet WarFPS Game ပါခင်ဗျာ......
Game description: Puppet WarFPS
Download Media ( 2.19 MB)
Posted by kozin at 6:06 PM0comments
Printer and PDF
ကျွန်တော် ဆိုင် လိပ်စာ
အမှတ်(၉၅၄/ခ)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော် အိမ်ရာအနီး၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။
IT New (1)
Kaspersky Key (3)
Avast Internet Security 2013 အတွက် License Keys လေ...
Live Wallpaper လေးပါ ( Android)
Android အတွက် IDM လေးလာပါပြီ
လှိုင်သာယာတွင် Wireless Internet ယူလို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ.. အခုလို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် kozinkonzaung@gmail.com
Copyright 2010 - ကိုဇင် (ကုန်းဇောင်း)